Real Madrid oo heshiis la gaartay badelka madaalaha reer Brazil ee Casemiro – Gool FM
Real Madrid oo heshiis la gaartay badelka madaalaha reer Brazil ee Casemiro
Dajiye October 13, 2020
(Madrid) 13 Okt 2020. Saraakiisha kooxda Real Madrid ayaa tallaabo dhab ah u qaaday saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe naadiga Rennais ee Eduardo Camavinga, kaasoo loo arko mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican kubadda cagta xilligan la joogo.
Eduardo Camavinga oo 17 jir ah ayaa qandaraaska uu kula jiro kooxda Rennais wuxuu dhacayaa xagaaga 2022.
Sida laga soo xigtay wargeyska “Okdiario” ee dalka Spain Real Madrid ayaa heshiis afka ah la gashay Eduardo Camavinga, wuxuuna laacibka reer France saxiixi doonaa qandaraas muddo dheer oo Lix xili ciyaareed ah uu kula joogi doono Los Blancos, kaasoo kaga bilaaban doono xagaaga soo socda.
Wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in qandaraaska Camavinga ee Rennes uu dhacayo xagaaga 2022, sidaas darteedna Real Madrid ay awood u yeelan doonto inay kula saxiixato qiimo jaban xagaaga soo socda, gaar ahaan maadaama ay kooxda reer France ay ku qasbanaan doono inay iibiso.
Inkastoo Real Madrid ay ka mid tahay kooxaga ugu qanisan kubadda cagta adduunka , hadana Los Blancos ayaa isku dayi doonto inay ka gudbiso Camaving dalab gaaraya 60 million euros xagaaga soo socda, laakiin taasi waxay ku xiran tahay heerka uu kooxdiisa kaga soo bandhigi doono Champions League xilli ciyaareedkan.
Real Madrid ayaa dooneysa inay lasoo saxiixato Eduardo Camavinga si uu bedel ugu noqdo Casemiro, sidaas darteed kooxda Los Blancos, ayaa qorsheeneyso inay yeelato khadka dhexe ugu fiican.
Muxuu ka yiri Lionel Messi kaddib guushii uu xulkiisa Argantina ka gaaray Bolivia??